Tsy fanajana fepetra Olona 2.252 no nampanaovina asa iombonana
Miezaka hatrany ny polisim-pirenena manentana ny isam-batan’olona mba hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana ny mety ho fihanaky ny valan’aretina Covid 19.
Na izany aza mbola nahatratra 2.252 ihany tao anatin’ny herinandro ireo olona tsy nanaja fepetra manerana ny Nosy ka voatery nampanaovina asa iombonana. Raha araka ny tarehimarika azo anefa dia nahatratra 3.212 ireo nanaovana fanentanana ka ny tany Antsiranana sy Mahajanga ary teto Antananarivo no betsaka indrindra. Nahatratra 1.021 mantsy izany ho an’itsy faritany voalohany. Tany Antsiranana ihany koa anefa no betsaka tsy nanara-dalàna indrindra satria dia nahatratra 699 izany. Ho an’i Fianarantsoa manokana dia nahatratra 100 % ireo tsy nanara-dalana satria raha nahatratra 583 ireo nanaovana fanentanana raha mbola nijanona ho 583 ihany ireo tsy nanara-dalana. Tafiditra ao anatin’ireo tsy nanara-dalana ireo moa ireo tsy nanao arotava na nanao ihany fa natao aro saoka. Toraka izany koa ireo mpamily taxibe sy ny mpanampy azy tsy manao visière. Ireo tsy manaja ny couvre feu….